HP ကပရင်တာ HP က LaserJet Pro ကို MFP M1136 / P1106 / m1216nfh / p1108 / m126a / m126nw / ဘို့လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 88A (CC388A) - Tianse
Samsun များအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ K သည် / CMY သည့်အရာတစ်ခု M90 / C90 ...
Samsung ကပရင်တာများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ငွေကျပ်သည့်အရာတစ်ခု M45 ...
Dell ကအဘို့အလိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု B1160 ...
Ri များအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု SPC252C ...
လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 31A (CF231A) fo ...
လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 42A (Q5942A) fo ...
ရီဘို့လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု SP150 ...
လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 81A (CF281A) fo ...
HP ကပရင်တာ HP က LaserJet Pro ကို MFP M1136 / P1106 / m1216nfh / p1108 / m126a / m126nw / ဘို့လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 88A (CC388A)
1. လိုက်ဖက်တဲ့ပရင်တာ: HP က 88A (CC388A) HP က LaserJet Pro ကို MFP M1136 / P1106 / m1216nfh / p1108 / m126a / m126nw / P1007 / P1008 / M128fn / M128fp / M128fw / M202n / M202dw / M226dn / M226dw / M1139 / M1213nf / M1218nfs / ;
2. မူလက OEM သည့်အရာတစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းသော Printout, ဒါပေမယ့်ဒီထက်ကုန်ကျ;
3. အမြင့်စာမျက်နှာအထွက်နှုန်း, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1500 စာမျက်နှာများကို print ထုတ်နိုင်ပါတယ်;
OEM Code ကို HP က 88A (CC388A)
သက်ဆိုင် & Models HP က LaserJet Pro ကို MFP M1136 / P1106 / m1216nfh / p1108 / m126a / m126nw / P1007 / P1008 / M128fn / M128fp / M128fw / M202n / M202dw / M226dn / M226dw / M1139 / M1213nf / M1218nfs /
လိုက်ဖက်တဲ့ပရင်တာ: HP က 88A (CC388A) HP က LaserJet Pro ကို MFP M1136 / P1106 / m1216nfh / p1108 / m126a / m126nw / P1007 / P1008 / M128fn / M128fp / M128fw / M202n / M202dw / M226dn / M226dw / M1139 / M1213nf / M1218nfs /;
မူရင်း OEM သည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းသောအဖြစ် Printout, ဒါပေမယ့်ဒီထက်ကုန်ကျ;
အမြင့်စာမျက်နှာအထွက်နှုန်း, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1500 စာမျက်နှာများကို print ထုတ်နိုင်ပါတယ်;
စိတ်မပူပါနဲ့-အခမဲ့အာမခံနှင့် techinical ဖြေရှင်းချက်ပေး 24 *7ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု။
ယခင်: HP ကပရင်တာ HP က / 87A / M506dn / M506x / M506n / M527z / M527f / M527c / M527dn များအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 87A (CF287A)
နောက်တစ်ခု: HP ကပရင်တာ HP က M126NW / M128FN / အက်ဖ်ဒဗလျူ / လက်ဗွေ / M1136 / M1213nf / M1216nfh များအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အမဲရောင်ဆိုးဆေးသည့်အရာတစ်ခု 88X (CC388X)